लकडाउनमा पनि रमाउन सकिने तीन ‘प’ |
लकडाउनमा पनि रमाउन सकिने तीन ‘प’
प्रकाशित मिति :2020-03-27 19:27:36
एउटा कुरा त हामीले यसपाली झनै राम्रोसँग बुझ्यौँ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा मानिसले स्वस्थ्य भएर बाँच्न पाउनु रहेछ ।
मानिसको जीवनभन्दा विशेष केही रहेन रहेछ । त्यसैले त संसारमा अहिले महाशक्ति राष्ट्रदेखि हामी झैँ झिनामसिना राष्ट्रको धेय पनि मानिसको ज्यान जोगाउने नै मात्र रहेको छ ।
हाम्रो सरकारले पनि मानिसको ज्यान जोगाउनकै लागि भनेर आजदेखि लकडाउन गरेको छ । यो पनि हामीलाई ‘आआफ्ना घरमै सुरक्षित भएर बस,यतिबेला तिमीहरू आफ्नै घरमा सुरक्षित बाँच्न सक्छौ’ भनेको हो ।
यदि हामीले आआफ्नो स्वास्थ्यका लागि सँधै राम्रो बानी बनाएका छौँ भने सोही अवलम्वन गरौँ र छैन भने पनि यस रक्षक जनबन्धको समयमा कम्तिमा पनि यी तीन ‘प’ को पालना गरेर हाम्रो वर्तमानको स्वास्थ्यका लागि सुरक्षा कवच बनाऊँ र भविष्यका लागि पनि स्वस्थ्य र सुन्दर जीवन निर्माणमा सहभागी बनौँ । जसले गर्दा आगामी जीवन रमाएर बाँच्ने काम गर्न सकिन्छ ।
१. पानी :
‘अन्नभन्दा सन्न (झोल पदार्थ) बढी खानुु भन्ने हामीले लोकोक्ति सुनेकै हौँ । हामीले यसको अर्थ नबुझेर पालन नगरेका हुन सक्छौँ । हामीले यो कृत्य नगरेको भए आजैदेखि यसको शुरूवात गरौँ ।
पर्याप्त पानी पिएर आफूभित्र भएका फोहोर मैला बाहिर निकाल्न अर्थात् शरीरको आन्तरिक शुध्याईँका लागि हाम्रो शारीरिक संयन्त्रलाई सहयोग गरौँ । शरीरभित्र फोहोर मैला बाँकी रहेपछि नै सोही फोहोरमैला कुहेर, किरा परेर हाम्रो शरीर रोगी र कमजोर हुने हो ।
सकेसम्म व्रम्हमुहूर्तमा (सामान्यतस् ५.०० बजेदेखि ७.०० बजेसम्म) उठ्ने गर्नु पर्छ । त्यसपछि उषापान (राति दाँत माझेर सुत्ने र बिहान मुख कुल्ला नगरी पिइने पानी, जसलाई तामाको भाँडामा राखिएको वा फिल्टर गरिएको हुनुपर्छ) अलिअलि गर्दै दुई लिटर मनतातो पारेर पिउने गर्नुपर्छ । पानी खाँदा चिउरा खाए जसरी नै खानु पर्छ । पानी खाँदा जहिल्यै पनि बसेर मात्र खानुपर्छ ।
राम्रोसँग शौच हुनु पर्छ, शौच सकेर स्वास्थ्य अवस्था अनुरूप नुहाउने अथवा नसक्नेले हात मुखमात्रै धोए पनि हुन्छ ।
२. प्राणायाम :
मानिसलाई बचाउने मान्छेभित्र भएको प्राणशक्तिले नै हो । प्राणशक्ति बलियो हुनेलाई हत्तपत्त जुनसुकै पनि सङ्क्रमणले समात्न सक्तैन । प्राणशक्ति बलियो बनाउनका लागि हाम्रो फोक्सोले पर्याप्त मात्रामा प्राणवायु (oxygen) ग्रहण गर्न पाउनु पर्छ । प्राणायामले सोही कर्ममा हामीलाई मद्धत गर्छ ।
प्राणवायु ग्रहण गर्नका लागि कुनै डाक्टर वा अस्पताल पनि जानु पर्दैन । महङ्गो औषधीका लागि पैसा रित्याउनु पनि पर्दैन । केवल व्रह्ममुहूर्तमा उठेर सासको व्यायाम गर्नुपर्ने मात्र हो । हाम्रा लागि प्रकृतिले निश्शुल्क वितरण गरेको प्राणवायु हामीले सङ्कलन र सङ्ग्रह गर्ने मात्र हो । हामीसँग पर्याप्त प्राणवायु हुनासाथ हामीभित्रका हाम्रा रक्षक सिपाइहरू बलिया हुन्छन् र बाहिरी आक्रामक दुष्मन सङ्क्रमणात्मक किटाणुहरूलाई लखेट्न अथवा निस्क्रिय पार्न मद्धत गर्छन् । पर्याप्त प्राणशक्ति धारीलाई हत्तपत्त कुनै पनि प्रकारका सङ्क्रमणले छुन सक्दैन ।
अरू त अरू घरमा पर्याप्त खाद्य पदार्थ छैन भने पनि प्राणशक्ति मजबुत हुनेका लागि भिटामिनको कमी हुँदैन । त्यसैले यतिबेलाको जनबन्धका मौकामा केही योगका आसन वा व्यायाम र अनुलोम विलोम, कुम्भक, कपालभाँती, भ्रामरी, उद्गीत आदि प्राणायामहरू गर्दै ध्यान गर्ने बानी बसाली हालौँ।
हामीले यस जनबन्धलाई हाम्रो जीवन रक्षाका लागि पर्याप्त समय पाइएको अवसरका रूपमा उपभोग गरौँ । आफ्नो शारीरिक अवस्था अनुरूप सहज हुने गरी रमाएर यी कर्म गरौँ ।
प्राणायाम विहान र बेलुकी सन्ध्याकालमा पनि गर्नु थप उपयुक्त हुन्छ ।
व्यायाम, प्राणायाम र ध्यान सकेर आधा घण्टाको विश्राम लिनु पर्छ ।
त्यसपछि मात्र तरल वा ठोस पदार्थ खाने गर्नुपर्छ ।
३. पढ्नेलेख्ने :
‘सबैभन्दा असल र कहिल्यै नरिसाउने मित्र नै पुस्तक हो’ भनेर हामीलाई वाल्यकालमै भनिएको थियो । पढ्ने बानी भएका मानिसले आफूलाई कहिल्यै एक्लो महसुस गर्दैन । अर्को कुरा असल विषय पढेर रमाउने व्यक्ति मानसिक विचलनमा पनि पर्दैन । त्यसैले पठनलाई ‘मानसिक खुराक’ पनि भनिन्छ ।
मानिस र पशुवीचको सबैभन्दा ठूलो फरक नै लेखपढ हो । जतिसुकै विशिष्ट जातको पशु वा सम्पन्न वा विद्वान व्यक्तिको सङ्गत र संरक्षणमा बसेको पशुले पनि लेखापढी गर्न सक्तैन । अर्कातिर जस्तै असहाय मानिसले पनि चाहना गरेमा विविध तरिकाले लेखपढ गरेका उदाहरण हाम्रामाझ पर्याप्त छन् ।
मानिसले आफ्नो समयको सदुपयोग असल कुराहरू पढेर गर्न सक्छ ।
अहिलेको विश्वमा मानिसको एउटा जीवनमा त के कैयौँ जीवनमा पनि पढेर पढिनसिद्धिने सामाग्री मानिसले नै लेखेर प्रकाशित गरेका छन् । हिजोआज ‘मसँग पढ्ने पुस्तक छैनन्’ भन्नु पनि परोइन् । किनभने अनलाइनमै पनि पर्याप्त पठनीय सामाग्री उपलब्ध छन् । अनलाइनको सदुपयोग गर्दै हामी हाम्रो बानीमै परिवर्तन गर्न सक्छौँ, पढ्ने बानी बसाल्न सक्छौँ र ‘पठन संस्कार’को शुरूवात गर्न सक्छौँ ।
यी तीन ‘प’ को पालना गरेर कर्फ्यू अवधिमै आफू थप स्वस्थ्य हुने प्रण गरौँ।
आपतै नपरूञ्जेल घरबाट बाहिर कदापी ननिस्कौँ ।
आफू पनि बाँचौँ र अरूलाई पनि बाँच्न दिउँ ।